Soo dejisan AutoCAD 2017 – Vessoft
Graphics iyo design /
Qalab ayaa habboon in la shaqeeyaan sawiro 3D. Software waxaa ka mid ah tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay ee lagula socdo iyo abuuridda kulan video.
software The si loo go'aamiyo midabka ah ee pixel taas oo dulqabo mouse waxay muujinaysaa in. software soo bandhigayaa midabka ah ee pixel ee ah qaabab caadi yar.
XnView 2.40 Standard, Extended iyo Minimal
Qabashada Screen Graphics iyo design
editor A awood for muuqaalaynta 3D iyo abuuridda of content ee digital. software waxay leedahay qalab ah ee lagula socdo ee walxaha naqshadda of qaabab kala duwan.
Converters Video Qabashada Screen
Virtual DJ 8.2.3848 iyo 7.4.7
Google Chrome 60.0.3112.78 iyo 61.0.3163.13 dev